Isifinyezo se-URL singaziwa
. 1 yure1 usuku1 iveki1 inyanga1 unyaka
ô.cc ngumthumeli wegama ongaziwayo we-URL. Dreferrer amakhonkco akho ngokulula, udibanise ngokwakho nakwi-app yakho. Akukho zibalo, akukho magogo. Imfihlo yakho ikhuselekile.
Kutheni le nto kufuneka ndingabizi kwaye ndithothise i-URL yam?
ô.cc iya kwandisa ubucala bakho ngokusebenzisa isreverrer esingenanto (dereferer) salo lonke unxibelelwano olunika. Kwaye, kuya kunqamla amakhonkco akho, kukwenza kube lula ukubelana kwimidiya yoluntu kunye nelinye iqonga lokwabelana. Uyakwazi ukwenza ngokwakho i-url yakho kwaye uchaze ixesha lokuphelelwa. Kuba igcina kuphela amakhonkco ofuna ukubuyela kulo, ikuvumela ukuba ufinyeze urls simahla.
Ummeli ophambili yindlela yokuthumela umsebenzisi kwi-URL ethile kwiphepha lewebhu. Ngokubanzi, izikhangeli zewebhu zithumela ulwazi (kubandakanywa ne-Referer) ngelixa ubhekiswa kwelinye iphepha. Indima yomlingisi kukufihla / ukususa loo lwazi kwiwebhusayithi exhunyiwe. Ukuba umphathi wewebhu ufuna ukuhlalutya iilogo zewebhusayithi yakhe, iya kubonisa i-URL yomntu oza kubamba esikhundleni se-URL yentsusa.
1. Cola okanye ubhale i-URL yakho kwigalelo.
2. Ngenisa igama lesiko (ngokuzithandela).
3. Ngenisa umhla wokuphelelwa kwesiko (ngokuzithandela).
4. Cofa kufutshane.
Uya kuthi emva koko ufumane i-URL entsha onokuthi wabelane ngayo kwaye uyisebenzise!
Ungayidibanisa njani kwisicelo sam?
Sebenzisa nje i-url https: //ô.cc/? kwaye yongeza url yakho yokoqobo kuyo.
Indlela yokufinyeza ii-URL ngokukhawuleza?
Unokutshitshisa kwaye ungabizi i-URL yakho ngokukhawuleza kwaye kulula kakhulu.
- Ukongeza le ncwadana inikiweyo uyithandayo.
- Yiya kwiwebhusayithi oyifunayo
- Cofa kwi ô.cc oyithandayo
Tsala kwaye ulahle i-bookmarklet yethu kwibar yesixhobo sakho ukuze uvelise ngokuzenzekelayo i-url emfutshane ngelixa uzula ngokuchofoza ngokulula kwemouse.
Iinkcukacha ezithe kratya!
Kutheni kufuneka unqumle kwaye ungazazi amakhonkco akho?
Ukushwankathelwa kwegama le-URL kusondele ixesha elide ngoku. Sisenokungabuqondi ubukho. Kodwa phantse kuyo yonke indawo kwi-intanethi. Esona sizathu sokuqala sokokuba kuncothulwe amakhonkco kukuba kulula ukukhumbula abantu abanokukhangela kule webhsayithi kwi-intanethi. Masithi unekhonkco kwiwebhusayithi yakho okanye ikhonkco elibheke kwisiqulatho sewebhusayithi yakho kwi-URL enkulu kakhulu kwaye nayo ayinakuthethwa ngomlomo.
Masithi i-https: //example.com/5dc1apgeniune usenokuba ukhe walubona olo hlobo lwe-URL xa ufumana ikhonkco elikhutshelwe ngaphezulu kwibhodi yakho eqhotyoshweyo yesixhobo sakho. Sele uqaphele ukuba awukwazi ukuxelela ikhonkco kumyalezo osemthethweni oya nakubani na.
Kukuthintela kwinyathelo lokuqala lokuthengisa kwintengiso yoluntu. Eso sesona sizathu sisisiseko sokuba isifinyezo se-URL ungasifumana isakhono sokuba nomlomo onobuhlobo kwaye kulula nokufunda ikhonkco onokuthi uchwethe ngokulula kwaye wabelane ngokulula. Indawo ekufumaneka kuyo izixhobo ezifanayo yaziwa ngokuba yi-URL ngokwendawo ekuya kuyo umxholo othile kwiwebhu yehlabathi liphela.
Inkqubo yokufinyeza kwe-URL isebenza ngendlela yokuba ikwazi ukunciphisa inani loonobumba kwikhonkco kodwa ibe isenakho ukukhokela abasebenzisi ukuba bayale kuloo mxholo.
Xa ufumana i-URL enkulu phambi kwakho kunzima kakhulu ukukhumbula yonke le nxalenye. Kule meko isifinyezo se-URL sisebenzela wena ukunciphisa abalinganiswa kwi-URL kodwa usayenza ukuba ikwazi ukukuthumela kumxholo omnye.
Ngokwenza oku uza kuba nolwaziso oluhle kakhulu lwe-URL phambi kwakho oluya kuba lula ukukhumbula kwaye kube lula nokuchwetheza nokwabelana. Umphezulu wokuncitshiswa kwe-URL ikwanakho ukunxibelelanisa iiwebhusayithi ezininzi okanye amaphepha ewebhu amaninzi kwi-URL enye.
Esona sizathu siphambili sokufinyezwa kwe-URL kukuba ibonakala icocekile kwaye kulula kwaye nangaphandle kwalo naluphi na uhlobo lwempazamo inokuba nakho ukwabelana ngeenkonzo zonxibelelwano ngokuthe ngqo. Ikwanazo nezinye izibonelelo zokhuselo lokukhusela indawo kunye nedatha kunye nokwenza ukuba izilwanyana ziye kulo naluphi na uhlobo lokufikelela okuyingozi. Ukushitshiswa kwe-URL kukwenza kube lula ukwenza umxholo wenjini yokukhangela nesebenzisekayo kwi-intanethi.
Masithi unayo iwebhusayithi yebhlogi apho wenza khona intengiso yeenkonzo ezahlukeneyo apho uya kwabelana khona ngeekhonkco ezahlukeneyo. Ngomshunquli we-URL unokubonelela ngokufutshane kunye neenguqulelo ze-URL kwaye uzongeze ngaphezulu kwamagama aphambili ukuze abantu bakwazi ngokulula ukufumana umxholo kwaye banokubekwa ngokulula ngaphezulu kohlalutyo lukaGoogle.
Njengoko isenza kube lula ukuba amakhonkco abiwe abasebenzisi bayakwazi ngokulula ukunxibelelana nokupela kunye nokubakhumbula ngokulula. Inkonzo yokunqunyulwa kwe-URL ikwanceda nasekuthembekeni kwabathengi bewebhusayithi yakho. Esona sizathu siphambili kukuba ngokunqamleza i-URL ufumana ukuba ube ne-URL yokufunda enobuhlobo eqhubeka kakuhle ngovavanyo lokufundwa komxholo okwi-Intanethi. Kwaye xa imalunga nefolda okanye ushicilelo unganakho nethuba lokufumana ikhonkco lakho licocekile kangangoko kunokwenzeka ukuze libonakale linokuthenjwa njengoko linokubakho kubathengi abanokubakho.
I-URL engaziwayo ishunquli
Olu hlobo lwe-URL ngokusisiseko lolo olusebenzise ukubonelela ngenkonzo yokuphononongwa kwiwebhusayithi yakho ngaphandle kokulandelelwa kweenkcukacha zakho ngqo okanye iinkcukacha zomntu owenza uphando. Uhlobo olunjalo lwehyperlink lunokuncamatheliswa ngokulula kwii-imeyile okanye nakwifestile pop-up yewebhusayithi yakho okanye kwiphepha lokubekwa. Usebenzisa i-URL engaziwayo unceda umniniwebhusayithi ngokubonelela ngekhonkco elikhuselekileyo kunye nelinobumfihlo lewebhusayithi ukuze abasebenzisi bakwazi ukuthatha uvavanyo lomxholo kunye nokuba nako ukufumanisa umgangatho wewebhusayithi ngokubanzi.
Kwaye ngokusisiseko kunceda naluphi na uhlobo lwezinye iziqulatho eziyingozi ze-intanethi. Njengalapho usanda ukunxibelelanisa kuyo yonke ikhonkco lewebhusayithi yakho ukuya kulo naluphi na uhlobo lwesiqulatho sokukhuthaza ke kunokwenzeka ukuba umxholo kunye nendawo ekuyo umxholo wakho kwiwebhu yehlabathi ngokubanzi kungenziwa lula ukulandela kwaye nako kunokuxhomekeka amagama ayingozi. Ngelixa kwelinye icala usebenzisa i-engaziwayo kunye emfutshane kunye nenguqulelo ye-URL yokwenyani iya kukubonelela ngolongezelelo lwabucala kwaye inokukunceda ukukhusela umxholo wakho ukuya kwinqanaba elikhulu.
Kuyinto entle kwabo bantu bazimisele ukufaka kunye ne-URL yokuhambisa umxholo kwakhona wentengiso. Kukho iinkonzo ezishotayo ze-URL kwi-intanethi ezikwaziyo ukwenza i-URL yakho ukuba ingaziwa nokuba ifundeka lula.
Iindlela zokwenza ufinyezo lwe-URL ngokusisiseko kulandela indlela yokusebenza kwe-http. Oku kunokusetyenziselwa ukufinyeza kunye nokwenza indlela engaziwayo yewebhu ikhonkco okanye idilesi ye-IP. Le ndlela inokufutshane kwaye iphantsi kwaye ithathe indawo yabanye abasebenzisi be-URL ende kwaye ikwazi ukuyenza ngokufutshane kwaye inguqulo iya kugcina indawo efanayo yewebhu kwihlabathi liphela.
© 2022 ô.cc • All Rights ReservedUnxibelelwanoUmthetho wabucala